Puntland oo qoraalka kaga hadashay shirka Muqdishu
“waxaan aad uga xumahay beesha caalamka iyo madaxda soomaaliyeed hortooda inaan ka caddeeyo warka ka soo yeeray Madaxweynaha iyo Ra’iisul-wasaaraha ee sheegeya in Kismaayo heshiis lagu gaadhey, waxaanse halkan kaxaqiijinayaa in aanay jirin wax heshiis ah oo lagu soo gaarey magaalada Kismaayo oo la xiriira geeddi-socodka doorashooyinka” ayuu yiri Madaxweyne Dr.Gaas.
MUQDISHU: Barlamanka Federaalka ayaa qoraal kasoo saarey go'aanka xukuumada Ra'isal wasaare Cumar Cabdirashiid kaga hadashey qaabka doorashada Somalia u dhaceyso.
Xukuumada Ra'isal wasaare Cumar Cabdirashid ayaa kulan deg deg ah ay xalay isugu timid kaga hada ...
Cumar Cabdirashid oo difaacey nidaamka 4.5
Soomaliya 30.01.2016. 16:06
Puntland: Wasiir hore oo ka hadlay nidaamka 4.5
Puntland 30.01.2016. 14:46
​Madaxweyne Gaas oo Muqdishu ku wajahan
Puntland 07.04.2016. 14:23